Maxaad ka taqanaa Shaqsiyaadka ugu awooda badan xiligan ee ku hareereysan Madaxweynaha Somaliya | Somali - Diaspora
Maxaad ka taqanaa Shaqsiyaadka ugu awooda badan xiligan ee ku hareereysan Madaxweynaha Somaliya
Thursday, September 27, 2012 (Moment Media Group) -Tan iyo markii la soo doortay madaxweynaha cusub Xasan Sh. Maxamuud, waxaa soo baxayey magacyada shaqsiyaad aad u awood badan oo ku hareereysan madaxweynaha, islamarkaana ah iyagu kuwa qaadanaya go’amada kama danbaysta ah ee ka soo baxaya xarunta madaxtooyada.
Shaqsiyaadkan waxaa u badanyihiin kooxda la magic baxdey Damjadiid (dhiig Cusub), waxana ku wehliya laba ilaa sadex qof oo kale oo ay isku barteen intii ay wadeen xisbigii siyaasiga aha ee madaxweynuhu gudoomiya ka ahaa labadii sano ee ugu danbaysay.
Kooxdan Dam jadiid ayaa u badan shaqsiyaad aan aan khibrado badan lahayn, laakiinse waa koox aad u firfircoon, taasna waxaad ka garan kartaa sida ay ugu guuleysteen in ay gadaan Xasan Sh. Axmed, islamarkaasana ay ugu guuleysteen ka dhex gadaan baarlamaanka iyadoo ay tartamayeen dad ka aqoon iyo khibradbadan iyo kuwo ka lacago badanaa.
Dhaq dhaqaan dam jadiid, ayaa waxaa ugu muhiimsan:
1-Faarax C/qaadir Muxumed oo ah hogaamiyaha Ruuxiga ah oo daraasadka Islaamka ku soo qaatay jaamacad ku taal Pakistaan Wuxuuna si wanaagsan ugu hadla luuqadaha Ingiriiska iyo Carabiga, waana shaqsi hal abuur badan, aad u samyeeya saaxiibada, islamarkaasna yaqaan sida uu u burburiyo qofka kasoo horjeeda.
Faarax C/qaadir ayaa waxaa uu matalaya shaqsiga ugu muhiimsan xiligan markay ay noqoto go’aan qadashada talada dalka, waxayna bulshada reer Muqdisho durba u bixiyeen Faarax sakiin, ninkani waxaa uu kasoo jeedaa beesha reer aw xasan , wuxuuna horey u ahan jirey madaxa hay’ad lagu magacaabo wakaalada muslimiinta Afrika.
2-C/kariin Xuseen Guuleed: waa shaqsiga labaad xagga awoodda kooxdani, waa nin aad u firfircoon oo gal gal ah, aadna u kala yaqaan bulshada Xamar.
C/kariin malaha khibrado badan iyo aqoon la tilmaami karo, laakiin wuxuu ku hadlaa afka Carabiga, wuxuuna khibrad ku dhex kasbadey urur diimeedka qunyar socodka ah ee Islaax intii aanu ka bixin sanadkii 2001 asaga iyo kooxdiisa damjadiid.
C/kariin oo u dhashay Beesha Hawiye Habar gidir (Sacad), waxa uu hadda madax ka yahay xafiiska Soomaaliya ee wakaalada Musliinta Afrika oo saaxiibkiis Faarax ka dhaxalay.
3-Dr. Maxamed Axmed Sh. Cali (Doodishe), waa ninka ugu aqoonta badan Kooda Damjadiid, waxaa uu shahada PHD ee Culuumta Siyaasadda ka qaatay Jaamacad ku taal dalka Suudaan.
Doodishe waa wiilka ugu wayn caruurta uu dhalay Axmed Sh. Cali Buraale oo horey u ahaan jirey hogaamiye kooxeed gobolka Gedo , lana shaqaysan jirey dowlada Itoobiya.
Maxamed Doodishe oo u dhashay Beesha Daarood gaar ahaana Mareexaan (Celi Dheere), waa nin aamus badan oo ka dhaq dhaqaaq yar kooxda inteeda kale, wuxuuna hada ka tanaasulay damaciisii ahaa inuu qabto xafiiska raysu lwasaraha, ka dib markii culeys ka yimid kooxdiisa.
4-Cumar Daahir C/raxmaan: wuxuu arimaha diinta kusoo bartay Sucuudiga sanadihii sideetameyadii, wuxuuna leeyahay bulsho dhex gal xoog badan, waana shaqsiga sadexaad xagga awooda Damjadiidka.
Cumar waxaa uu kasoo jeeda isna beesha Reer Awxasan waxana ay aad isgu dhawyihiin qaraabona yihiin faarax C/qaadir.
5-Maxamed Cabdi Abti doon, Waa Hawiye Habar gidir(Saleebaan), Waa Maamulkii Sare Ee Dugisga Hoose Dhaxe ee Maxamuud Xarbi Sanadii Danbe ee Xiliga Dagaalada Sokeeyay ,wuxuu horey u ahan jirey urukii aala sheekha ee dowlada shariif awooda ku lahaa , laakiin wuxuu in yar ka mid noqdey xubin ka tirsan Islaax, ka dibna waxa ku darmadey kooxda damjadiid. Abti doon wuxuu xiligii dowladii farmaajo noqdey wasiirka u dowlaha gashaan dhigga.
6-Dr. Maxamed Nuur Gacal, waxaa uu sida abti doon ka mid aha aala sheekh, wax yarna waxa uu ku biirey Islaax, ka dibna waxaa uu ka mid noqdey Koxdan Dam jadiid.
Gacal oo u dhashay beesha hawiye Murursade (Cabdalla sabti) waxaa uu ku xigeen ka yahay hadda xafiiska ururka Iskaashiga islaamku ku leeyahay Soomaaliya.
Ninkani waxa uu shareecada iyo qaanuunka ku bartay dalka Suudaan ,waxaana halkaas uu dhawaan qaatay shahada PHD da.
7-C/raxmaan Xuseen Odawaa; waa habar gidir Saleebaan ah, waxaana uu gadaal kaga soo biirey damjadiidka, wuxuu si xoog ah u dhex boodey maxkamadihii islaamka.
Odawaa waxaa uu wax ku bartay dalalka Suudaan iyo Maleysia, wuxuu hadda madax ka yahay Macadka SIMAD oo jaamacad loo badalay. Machadkan waxa hore madax uga ahaan jirey madaxweynaha Xasan Sh. Maxamuud. Odawaa, iyo abti doon waxa ay aad ugu ololeynayaan in rayselwasaare laga dhigo Saacid Garaad oo ah ninka qaba Xildhibaan Caasha Xaaji Cilmi oo ay nimankan isku reer yihiin, halka uu Faarax C/qaadir danaynayo ninka la dhaho Maxamed Barre oo ay saaxiib ahan jireen.
Waxaa kale oo jira shaqsiyaad kale oo awood ku leh xiligan xafiiska madaxtooyada laakiin aan ahayn Kooxda dam jadiid, waxana ka mid ah. —
1-Fahad Muxumed Yasiin Xaaji suldaan, Wuxuu ahaa xubin ka tirsana urukii mayalka adkaa ee Al itixaad, sidoo kale waxaa uu muddo maamulayey xafiiska Aljazeera qaybta carabiga.
Fahad oo aan wali jaamacad kasoo bixin hase ahaatee ku hadla afka Carabiga, waxayna qaraabo dhowyihiin Faarax C/qaadir, waxayna taasi awood wayn u siisey inuu awood ku yeesho howlaha madaxtooyada xiligan.
2-Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, waa Habar gidir Cayr, wuxuu ku hadlaa afafka carabiga iyo Ingriiska, waxaana uu shahada Masters Culuumta Siyaasadda ku qaatay jaamacad ku taal dalka Masar.
Mahad Salaad ka mid ma ahayn ururada diniga ah, laakiin wuxuu muddo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga madaxweynaha ee xaruntiisu ahayd Nairobi.
Qurbo Joogta Soomaaliyeed oo Godkooda Biyo ugu soo galay lagana yaabo in ay ku fashilmaan Siyaasada Cusub ee Dalka Aqoonta iyo qabyaaladduu Soomaalidu miyay isla qabsadeen?